ढाड सेक्ने महँगी- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
‘मूल्य नबढेको कुनै सामान नै छैन । कुन सामानको मूल्य कति बढयो भन्ने मात्र हो ।’
असार २, २०७५ वसन्तप्रताप सिंह, मनाेज बडु
बझाङ/दार्चुला — महाकाली नगरपालिका ३ दार्चुलाकी द्रोपती भट्टले वैशाखको अन्तिम साता ४० किलोग्रामको मोटा चामल १ हजार ६ सय रुपैयाँमा किनेकी थिइन् । जेठ २० तिर त्यही परिमाणको मोटा चामल किन्न जाँदा पसलेले मूल्य बढेको भन्दै १ हजार ८ सय लिए ।
बझाङ सदरमुकाम चैनपुरका पसलमा तरकारी किन्दै उपभोक्ता । तस्बिर : वसन्तप्रताप
दैनिक ज्याला मजदुरीको भरमा परिवार चलाइरहेकी उनी एक महिनाको अवधिमा यसरी चामलको भाउ बढेको सुनेपछि छक्क परिन् । ‘एक महिनामै बोरामा २/२ सय बढाएछन् । हामीजस्ता गरिबले त बाँच्नै मुस्किल भयो,’ उनले भनिन् ।
जेठको दोस्रो सातासम्म ५० किलो मोटा चामलको बोरा २ हजारमा खरिद गरेको बताउने बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकाका कैलाशका भरत कामी पनि जेठ २८ को चामलको भाउ बढेर २ हजार २ सय ५० पुगेको सुन्दा चकित परे । व्यापारीहरूले मनपरी मूल्य बढाएर सर्वसाधारण उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम गरेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे । कामीले भने, ‘यो त अचाक्ली भयो । यत्रो मूल्य कसरी बढयो भनेर सोध्दा लिने भए लेऊ नलिने भए नलेऊ भन्छन् । भोकै बस्न पनि सकिँदैन ।’
माथि उल्लेख भएको चामलको मूल्यसूची दार्चुला सदरमुककाम खलंगा र बझाङ सरदरमुकाम चैनपुरको हो । सदरमुकामभन्दा ३/४ किलोमिटर टाढाका गाउँहरूमा मोटो चामल ५० किलोको बोराको २ हजार ८ सयदेखि ३ हजार १ सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको स्थानीय उपभोक्ताहरू बताउँछन् । झन् यातायातको सुविधा नपुगेका दुर्गम गाउँहरूमा त यही चामल ६ देखि ८ हजारमा बिक्री भइरहेको साइपाल गाउँपालिकाका वसन्त बोहराले बताए ।
‘चामल मात्र हैन प्रत्येक सामानको मूल्य बढेको छ ।’ बझाङ सदरमुकाम चैनपुरका खुद्रा व्यापारी नवराज जोशीले भने, ‘होलसेल पसलबाट नै मूल्य बढेर आएपछि हामीले पनि बढाउनैपर्‍यो । धनगढीबाट नै मूल्य बढेर आएको छ भन्छन् ।’ उनले दैनिक उपभोग्य सामानमा सबैभन्दा बढी तेलको मूल्य बढेको बताए । बजेट भाषणअघि ८० रुपैयाँमा बिक्री हुने आधा लिटर सनफ्लावर तेलको मूल्य बजेटलगत्तै बढेर ९० रुपैयाँ पुगेको बताए ।
चाउचाउ, बिस्कुट, पिठो, मैदा, दाल, मसला आदि सबैको मूल्य बढेको बताउँदै अर्का खुद्रा व्यापारी धर्मलाल बोहराले भने, ‘मूल्य नबढेको कुनै सामान नै छैन । कुन सामानको मूल्य कति बढयो भन्ने मात्र हो । सबै सामानको मूल्य बढेकै छ ।’
बजेट भाषणलगत्तै सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा सामानको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन् । दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य अकासिएपछि न्यून आए भएका सर्वसाधरणहरू चुलो बाल्न सकस भइरहेको बताउँछन् ।
व्यापारीले मनपरी ढंगले मूल्य बढाएको र नियन्त्रण गर्ने निकाय पनि मौन रहेको बताउँदै दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका ९ गोकुलेश्वरका रामसिंह साउदले भने, ‘सबै मिलेरै बढाएका होलान् । नभए यसरी मनपरी मूल्य बढाउँदा किन कारबाही भएन त ?’ उनले १५ दिनको अन्तरालमा बढेको सामानको मूल्य सुनाउँदै उनले भने, ‘खानेतेल लिटरमा १५ देखि २० रुपैयाँ बढेको छ, चिनी, दाल, पिठो तरकारीलगायत अन्य सामानको बजार भाउ किलोमा ५ देखि १० रुपैयाँसम्म बढेको छ ।’
सरकारले बजेट भाषणमार्फत विभिन्न वस्तुहरूमा करको दर बढाउने भनेपछि व्यापारीहरूले मूल्य बढाएको बताउँछन् । मूल्य वृद्धिको असर जिल्लाको सदरमुकामभन्दा ग्रामीण क्षेत्रका बजारमा झन् चर्काे छ । दाचुर्लाको गोकुलेश्वर, शंकरपुर, ग्वानी, लटिनाथ, नौगाड, खण्डेश्वरीलगायत बजारमा दैनिक उपभोग्य र अन्य वस्तुहरूको भाउ छोइनसक्नु गरी बढेको उपभोक्ताको गुनासो छ । यस्तै बझाङको बित्थड, देउलेक, बागथला, विजगडा, झोता, झनाना, मौरीबगर, तमैल, रूपतोला, तल्कोटलगायतका ग्रामीण क्षेत्रका बजारहरूमा पनि सदरमुकामको भन्दा निकै नै चर्काे मूल्य असुल गरेर सामान बिक्री भइरहेको उपभोक्ताहरूको भनाइ छ ।
व्यापारीहरूले पहिले नै खरिद गरेको सामानमा कालोबजारी गरेर मूल्य वृद्धि गरेको गुनासो स्थानीयहरूको छ । ‘रातारात कसरी मूल्य वृद्धि हुन्छ ?’ चैनपुरका एक उपभोक्ता चक्र बोहराले भने, ‘पहिले नै ल्याएर गोदाममा राखेको सामानमा कालोबजारी भइरहेको छ । यो सरासर ठगी हो,’ उनले मदिरा र सुर्तीजन्य उत्पादनहरूमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य वृद्धि भएको बताउँदै व्यापारीहरूले बेइमानी गरिरहेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘बजेटको कारणले बढेको भए साउनबाट बढ्नुपर्ने, भाषण हुने बित्तिकै मूल्य वृद्धि हुने भन्ने पनि हुन्छ र ?’
दाचुर्लाका ग्रामीण भेगमा मूल्य वृद्धि भए पनि सदरमुकाम खलंगा र महाकाली तटीय क्षेत्रका बजारमा नेपाली वस्तुको कम प्रयोग गरिने हुँदा थोरै वस्तुको मात्र मूल्य बढेको खलंगाका व्यापारी देवदत्त भट्टले बताए । उनले भने, ‘महाकाली वेल्टमा भारतीय बजारबाट दैनिक उपभोग्यलगायत सामग्रीहरू आयात गरिने हुँदा यहाँ खासै प्रभाव परेको छैन ।’ यो क्षेत्रमा नेपाली वस्तुहरूमा बिलासिताका सामग्री प्रयोग गरिने हुँदा ती वस्तुको भने मूल्य बढेको नै छ । महाकाली तटीय क्षेत्रका व्यापारीहरू पनि दैनिक उपभोग्य र बढी किनमेल हुने सामानहरू भारतीय बजारबाट ल्याएर बिक्री गर्ने गर्छन् ।
बजेट भाषण भएलगत्तै सबै सामानको मूल्य वृद्धि भएर आएकाले आफूहरूले बढेको मूल्यमा सामान बिक्री गरेको थोक व्यापारीहरू बताउँछन् । ‘बजेट भाषण हुनुपूर्व आएका वस्तुमा मूल्य बढाएका छैनौं,’ दाचुर्ला गोकुलेश्वरका व्यापारी रमेश भण्डारीले भने, ‘बजेट भाषणपछि आएको मालमा उतैबाट मूल्य बढाएर पठाएको छ । हामी आफैं मूल्य बढाउँदैनौ, उताबाट बढेर आएपछि के गर्नु ?’ बझाङका थोक बिक्रेताहरूको पनि तर्क यस्तै छ । तलबाट बढेर आएका कारण आफूहरूले सोही मूल्यमा सामान बिक्री गरेको बझाङका बिक्रेता जगत मल्लले बताए ।
यहाँका बजारमा धनगढी, महेन्द्रनगर, अत्तरिया, नेपालगन्जबाट सामान आउने गरेको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएपछि ढुवानी भाडा पनि बढेका कारण सामानको मूल्य वृद्धि भएको व्यापारीहरूको तर्क छ ।
बजार मूल्यले आकाश छुन थाले पनि यसको नियन्त्रणको जिम्मा लिएका निकायहरू भने आफूहरूकहाँ गुनासो नै नआएको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म लिखित रूपमा बजारमा वस्तुको मूल्य बढयो भनेर उजुरी आएको छैन,’ दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खुमकान्त आचार्यले भने, ‘दुई दिनअघि मदिरा र सुर्तीजन्य सामानको मूल्य बढेको गुनासो मौखिक रूपमा आएको थियो ।’ कसैले मूल्य बढेको लिखित उजुरी गरे आकस्मिक बजार अनुगमन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ । ‘सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा प्रशासनले बजार अनुगमन गरेको एक महिना नपुगेको हुनाले तत्काल बजार अनुगमनमा जाने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘उजुरी आए प्रशासनले आकस्मिक रूपमा भए पनि बजार अनुगमन गर्न सक्छ ।’
यता बझाङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकसिंह कुँवरले महँगी बढेको विषयमा निकै नै गुनासो आएको बताउँदै तत्काल अनुगमन गर्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘सबैतिर मूल्य बढेको खबर आएकाले केन्द्रबाट कुनै निर्देशन आउँछ कि भनेर पर्खेका थियौं,’ उनले भने, ‘आइतबारबाट अनुगमन गरेर मनपरी गर्नेलाई कारबाही गर्छाैं ।’
प्रकाशित : असार २, २०७५ ०९:५७
गरिब मुलुकमा अर्बपति बन्ने काइदा
४ जेट विमान भएका बसिरी एचआईभी पीडितको उपचार र दृष्टिविहीनको दृष्टि फर्काउने दाबी गर्छन्
असार २, २०७५ दिनेश यादव
काठमाडौँ — गरिबी र अशिक्षाले जेलिएका मुलुकहरूमा धनाढय बन्नेहरूले थरीथरीका शैलीहरू अपनाउने गरेको पाइन्छ । कोही धर्मलाई त कोही ईश्वरवादलाई धन कमाउने माध्यम बनाउने गरेका छन् । तीमध्येका एक हुन अफ्रिकी महाद्वीपको दक्षिण क्षेत्रमा अवस्थित मुलुक मलावीका ४० वर्षीय पादरी सेफर्ड बसिरी । १ करोड ६० लाख मात्रै जनसंख्या रहेको मलावी एउटा भूपरिवेष्ठित मुलुक हो ।
सबै अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांकका आधारमा सम्भवत: विश्वकै सबैभन्दा गरिब मुलुक हो यो । त्यहाँको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) २२६ डलर रहेको छ । संसारकै ‘सबैभन्दा गरिब’ मुलुकमा सबैभन्दा बढी धनाढय व्यक्ति कसरी बन्छन् भन्ने कुराका लागि बसिरी एउटा उदाहरण बन्न सक्छन् । एउटा टेलिभिजनविज्ञ, मिडिया र कृषिभूमिका मालिकसमेत बताउने उनी आफूलाई स्वघोषित ‘भविष्यवक्ता’ ठान्छन् । आफूलाई ‘प्रोफेट’ का रूपमा परिचय गराउने गर्छन् ।
यसो त केही सञ्चार माध्यमहरूले उनको सम्पत्तिको स्रोत सुसमाचार प्रचार अर्थात् ईश्वरवाद (इभ्यान्लिज्म), कृषि र टेलिकम रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘बायोनेटवर्थ डट कम’ का अनुसार उनको कुल सम्पत्ति १५० मिलियन अमेरिकी डलर (१५ करोड डलर) रहेको छ । उनको पेसाचाँहि प्यास्टर (पादरी) र प्रोफेट (भविष्यवाणी गर्ने) रहेको छ । एउटा अर्को अनलाइनले उनको यो सम्पत्ति बनाउन त्यहाँ अरूलाई ६ मिलियन वर्ष लाग्न सक्ने भनेर टिप्पणी गरेको छ । यसको पुष्टिचाहिँ गरिएको छैन ।
‘प्रोफेट’ बसिरीलाई इसाई चक्रहरूमा ‘पापा’ को ‘मेजर वन’ का रूपमा चिनिन्छ । दुई वर्षभित्रै तीनवटा जेट विमान खरिद गर्न भ्याएका उनीसँग हाल चारवटा विमान रहेका छन् । अघिल्लो वर्षको जनवरी ६ मा ३७ मिलियन अमेरिकी डलरमा तेस्रो जेट ‘गल्फ स्ट्रिम थर्ड’ खरिद गरेपछि भनेका थिए, ‘म ईश्वरको मान्छे हुँ । मलाई विश्वास छ कि म एउटा उदाहरणका रूपमा बाँच्नुपर्छ । म त्यो शब्दहरू सिक्ने गर्छुु जुन सबैको विश्वासलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्छ । म क्रिस्ट्सको माध्यमबाट सबै कुरा गर्न सक्छु, जसले मलाई बलियो बनाउँछ । म त्यही गरिरहेको छु, जुन ईश्वरले भन्ने गर्छ । यस्तो अवस्थामा म अन्य मानिससँग मलाई अन्याय गर्न सक्छु । यी ‘प्रोफेट’ ले बाइबलमा यो मार्गलाई स्मरण गरेको हुनुपर्छ जहाँ क्रिस्ट्स धनाढय मासिसलाई आफ्नो पूरा अधिकार दिन र उसको पछाडि आउन भनेकै हुनुपर्छ ?
मलावीको लिगोङेको एक अन्यन्तै निर्धन क्रिस्चियन परिवारमा उनको जन्म भएको हो । उनका आमाबुबाका बारेमा सही जानकारी नभए पनि जाम्बियाबाट आएका हुक्सले र क्रिस्टिना बसिरीका छ सन्तानमध्ये चौथा हुन्, सेफर्ड बसिरी ।
मलावीको म्जुजुस्थित मोयाले सेकेन्डरी स्कुलबाट विद्यालय शिक्षा उतीर्ण गरेपछि उनले थेरापोन युनिभर्सिटीबाट उच्च शिक्षा हासिल गरे । उनको ‘प्रोफेट अफ गड’ अर्थात् भविष्यवक्ताको यात्रा १० वर्षकै उमेरमा सुरु भएको थियो । कलिलै उमेरमा आफूलाई ईश्वरको अवतारका रूपमा स्थापित गर्न उनी सफल भए । आफूलाई स्वयं ईश्वरसमेत घोषित गरे । उनको यश मलावीमा म्जुजुबाट फैलिएको हो । त्यहीँबाट उनी दक्षिण अफ्रिका, बोटस्वाना, जाम्बिया, तान्जानिया, नामिबिया र इथियोपियासम्म आफ्नाबारे प्रचार गर्न सफल भए । त्यहाँ आफ्ना चर्चका शाखाहरू विस्तार गरे ।
उनले तीव्र गतिमा विस्तार भएको ‘इन्लाइटेन्ड क्रिस्चियन ग्यादरिङ (ईसीजी) सन् २०१० मा सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । सेफर्ड हक्सेली बसिरीले दक्षिण अफ्रिकाको प्रिटोरियामा क्रिस्चियन चर्च ‘ईसीजी’ को स्थापना गरेका हुन् । तर, त्यही माध्यमबाट उनी अचेल चर्चित मात्रै हैन, उनको भाषण सुन्नका लागि बाक्लै भीड जम्मा गर्ने हैसियतमा पुगेका छन् । उनका अनुयायीहरूले बसिरीलाई एकजना चामत्कारिक व्यक्तिका रूपमा चित्रण गर्न थाक्दैनन् ।
आफ्नो वाचनकलाबाट सर्वसाधारणलाई लठयाउने उनले पछि जोहानेसवर्ग नजिकै स्यान्टनमा एउटा कम्पनीमा समेत लगानी गरेको सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । विकिपिडियाका अनुसार उनले खनिज र अन्य क्षेत्रमा लगानी गरे । उनले कम उमेरमै जम्मा गरेको ‘अकुत’ सम्पत्तिबारे सोधिएको प्रश्नमा भन्ने गर्छन्, ‘म प्रोफेटको अलाबा एउटा व्यापारी पनि हुँ । मेरो प्रगति र आम्दानीको स्रोत निजी व्यापार पनि हो ।’ उनलाई हाइट चर्चका नेता भनेर प्रश्न गर्न पाइन्न । यसले धार्मिक सद्भाव बिथोलिन सक्ने दाबी केहीको छ ।
दसौं हजारको संख्यामा रहेको आफ्ना अनुयायीलाई क्यास गर्न सक्षम भइसकेका उनले बीबीसीमा समेत आफ्नो अन्तर्वार्ता दिइसकेका छन् । उनका बारेमा अल जजिरा, न्यु अफ्रिकन, नाइजेरियन ट्रिब्युन र अफ्रिकन लिडरसिप म्याग्जिनले समेत कभरेज गरिसकेका छन् । वित्तीय अनियमितताबारे विवाद चुलिएपछि वोट््सवानास्थित ईसीजीको कार्यालय सन् २०१७ को डिसेम्बरमा बन्द गरिएको थियो । उक्त मुलुकमा प्रवेशका लागि बसिरीलाई भिसा लिनुपर्ने प्रावधान त्यहाँको सरकारले जारी गर्‍यो । उनको चर्चले यो निर्णयविरुद्ध अपिलसमेत गरेको थियो ।
यसै वर्षको जनवरी र फेब्रुअरीमा अमेरिकामा मिडिया कम्पनीमा संयुक्त लगानी गरेको बताइएको छ । उनले एचआईभी पीडित मानिसको उपचार गरेको र दृष्टिविहीनको गुमेको दृष्टि फर्काउने गरेको दाबी गर्छन् । अपांगता भएकालाई समेत सद्दे बनाएको समाचार बीबीसीमा प्रकाशित छ । उनी भ्रमणका क्रममा हवाई यात्रा गर्दा खिचिएको भिडियोहरू सोसल मिडियामा सेयर गर्ने गर्छन् । उनको रात्रिभोजहरूमा गरिने खर्चहरू विवादित बन्ने गरेका छन् । सन् २०१६ को जनवरीमा नामिबियाको विन्डहोकमा आयोजित रात्रिभोजमा प्रवेशका लागि १ हजार नामिबियाली डलर (८ हजार ३ सय ३५ रुपैयाँ) र गलाको टेबलमा डिनरका लागि सिट सुरक्षित गर्नका दक्षिण अफ्रिकी मुद्रा र्‍यान्ड (आर) २५ हजार (२ लाख १ हजार २ सय १२ रुपैयाँ) सम्म चार्ज लगाइएको थियो ।
बसिरी हलमा प्रवेश गर्दा अनौठो वातावरण सिर्जना हुने गर्छ । अनुयायीहरू ताली पडकाउँछन् र नाचगान गर्दै उफ्रिने गर्छन् । अनुयायीहरूले खचाखच भरिएको सभाहलमा उनका सुरक्षागार्डले सहयोग गर्छन् । भीड छिचोल्न उनका अंगरक्षकहरूलाई हम्मेहम्मे हुन्छ । केही अनुयायीहरूको सहयोग पनि यसमा हुन्छ, बाटो क्लियर गर्दै मञ्चसम्म पुर्‍याउने गर्छन् । यति मात्रै हैन, केही भावुक मण्डलीहरू उनको दर्शनका लागि पाँच घण्टासम्म धैयपूर्वक प्रतीक्षा गर्छन् ।
बीबीसीका अनुसार एचआईभीले ग्रसित मानिसलाई उपचार गरी चंगा बनाएको, दृष्टिविहीनको उपचार गरेको, गरिबहरूको भाग्य परिवर्तन गर्नेदाबी गर्नेका पछि यत्रो अन्धभक्ति किन ? उनी आज कुनै पनि ठूलो खेल स्टेडियमलाई आफ्नो अनुयायीले भर्न सक्ने हैसियतमा पनि पुगेका छन् । आफ्नो व्यक्तिगत प्रचार गर्न विश्वभरि भ्रमण गर्न उनी सधैं तत्पर रहन्छन् । भीडमा आफ्नो फोटोसहितको लेभेल लागेको मिराकल आयल ‘चमत्कारिक तेल’ लगायतका उत्पादनहरूसमेत बेच्ने गर्छन् ।
उनी अमेरिकी, बेलायत र एसियाका नियमित आगन्तुक पनि हुन् । जहाँ जान्छन्, ईसीजीको कार्यालयमा प्याक गरिएको झन्डा अनुयायीहरूले गर्वले फहराउँछन् । मञ्चमा पुगेपछि भन्ने गर्छन्, ‘म दक्षिण अफ्रिकी राजधानी प्रिटोरियामा आफ्नो चर्च परिसरमा ‘मेजर वन’ को नामले प्रख्यात छु ।’
असाध्य रोग लागेकाहरूलाई उपचार गर्ने उनको अपत्यारिलो दाबी केहीलाई झुठो लाग्ने गर्छ, जुन स्वाभाविकै पनि हो । तर, यसबारे उनी भन्छन्, ‘मेरो मन्त्रालय (चर्चको प्रधान कार्यालय) सबैका लागि हैन, यो तिनीहरूका लागि हो जसले ममाथि विश्वास गर्छन् । म मात्र ईश्वरको काम गर्ने दूत हुँ । ईश्वले हाम्रो बैठकहरूमा मानिसलाई चंगा बनाउँछन् । एकपटक जब मैले एचआईभी रोगीका साथ प्रिटोरियामा चिकित्सकसँग भेटें, उसले पहिले एचआईभी देखाउनका लागि परीक्षण गर्‍यो, मैले उसका लागि प्रार्थना गरें र त्यसपछि उसमा एचआईभी नेगेटिभ देखियो ।’ चर्चका अगाडि ‘मिराकल आयल’ बेच्ने बसिरी अविश्वासिलो र अपत्यारिलो काम गरेरै अर्बपति बनेका छन् ।
प्रकाशित : असार २, २०७५ ०९:५५